မှားဖျက်မိတဲ့ data များအတွက် Recover My Files 4.9.2.1235 နှင့် အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
Posted by ညီနေမင်း on 10:28 PM with7comments
မေး ဇင်မို့မို့မော်းကင်မရာကတ်ထဲက ဓါတ်ပုံတွေကို ကွန်ပျူတာ လည်းထည့်မလို့ ကတ်ကို usb ထည်းထဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာထဲကိုသိမ်းတာမလို့ ကြည့်တော့ ပုံတွေရှိသေးတယ်။ပုံတွေကို ကော်ပီကူးပြီး ကွန်ပျူတာလည်းထဲ့တာလဲ မရဘူး။သမီးတတ်သလောက်လေး ပုံတွေကို ဟိုလိုယူ ဒီလိုယူတာလဲ မရဘူး။ခဏကြာတော့ ကတ်ထဲက ဓါတ်ပုံတွေမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံး ဖျက်မီတာလား ဘယ်လိုကြောင့် ပျက်သွားတာလဲ သမီးမသိလိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒီ ပုံတွေကို ပြန်ယူလို့ရနိုင်လား အကို?။ဒီတစ်ခါတော့ အသေးစိတ်လေး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်ပြပေးပါလား အကို။ သမီးမှာ အဓိကလိုအပ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပျက်သွားလို့ စိတ်အကြီး အကျယ် ပျက်မီပါတယ်. ဆော့ဝဲလိုရင်လည်း အကိုမှာ ဆော့ဝဲရှိရင် သမီးကို မျှဝေပါလား။
ကဲညီမရေ အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကော နောက်ဆုံးထွက် version ကိုကော အစ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ပျက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေ ပြန်ရပါစေလို့ အစ်ကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်. software နဲ့ စာအုပ်ကို အောက်က Link ကနေ download လုပ်လိုက်ပါ. တစ်ခုတော့ ပြောလိုက်မယ်နော်. အောက်က ဖိုင်ထဲကစာအုပ်က win researcher font နဲ့ ရိုက်ထားတာပါ. အဲ့ font နဲ့မှ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. Download mirrorcreator | zshare | ziddu | mediafire win researcher font မရှိသူများ အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ. Researcher font အပြင် တစ်ခြား မြန်မာ ဖောင့်တွေကိုပါ ထည့်ထားပေးပါတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
Categories: မြန်မာ ebooks များ
Du KoSeptember 22, 2011 at 8:15 AMအစ်ကို ...ကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာမှာ packet.dll ဆိုတဲ့ File ပျောက်နေပါတယ်ဘယ်လိုပျောက်သွားတယ်လည်းမသိလိုက်ပါဘူး...ပြန်ရှာလို့လည်းမတွေ့လို့ပါ... အပေါ်က Recovery နဲ့လည်းစမ်းတာ ရှာမတွေ့လို့ကူညီပေးပါဦးနော်....ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုReplyDeletenanooamtSeptember 26, 2011 at 8:40 AMအကိုကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ ခင်ဗျာ ကျွန်တော် က ဟတ်ဝဲပိုင်း မှာအားသာနေတယ်နက်ဝက်(စ်) ပိုင်းမှာတော့ အာနည်းနေတယ် ကျွန်တော် လေ့လာနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလည်းဗျာ ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးလိုက်စမ်းနေတာ ဗိုင်းရပ်ကလွဲရင်ပေါ့စာအုပ်တွေဖတ်နေတယ်စာအုပ်တွေဖတ်ရင်းနဲ့ ရမလားဆရာ သင်တန်းတတ်ဖို့ ကအချိန် မပေးနိုင်လို့ပါ တတ်ဖြစ်အောင်တော့တတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ကျွန်တောက အိုင်တီသမားတစ်ယောက်အရမ်းဖြစ်ချင်တာ ဗျ အဲဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင် ဖြစ်မလဲဗျာဝါသနာလည်းပါတယ် ကျွန်တော်ကို ပြန်ဖြေပေးပါနော်....ReplyDeleteZINNovember 3, 2011 at 6:34 PMကျေးဇူးပါခင်ဗျာReplyDeleteZINNovember 3, 2011 at 6:36 PMthanksReplyDeletekhamkhamNovember 11, 2011 at 1:49 PMD;\_ အောက်မှာ ဓါတ်ပုံ shift deleat ဖျက်လိုက်မိတယ် အကို ရေ ပုံတွေ ပြန်ရနိုင် မလား ကူညီပါ အုန်း အကိုရေReplyDeletekhunNovember 16, 2011 at 8:27 AMကိုညီ ကူညီပါဦးဗျကျွှန်တော် အရင်က window vista နဲ့သုံးတဲ့ memory stick ရော hard disk ရောနှစ်ခုလုံး window mac မှာသုံးတာမရတော့ဘူးဗျ..အထဲက သီချင်းတွေဓါတ်ပုံတွေရောပျောက်ကုန်တယ် window vista မှာလဲသုံးတာမရလို့ပါ ကူညီပါဦးဗျာ..ReplyDeletesnowlayJanuary 23, 2012 at 1:37 PMrecovery နဲ့ခေါ်လိုက်တာကြည့်လို့မရတဲ့ပုံတွေပေါ်လာတယ်ဘယ် software နဲ့ repair လုပ်ရမလဲ ရှိရင် မျှဝေပေးပါဦးReplyDeleteAdd commentLoad more...